CosmoBody FREE 10-Day Trial Unlimited Online Workouts
musha » Cosmobody » CosmoBody FREE 10-Day Trial
CosmoBody FREE Trial Offer
Tirikupa Kwauri CosmoBody FREE Trial Offer kubva kuCosmoBody
Edza CosmoBody FREE nekuda kwe10 Days!
Iyi CosmoBody FREE mutsva yezuva 10 inokupa 100% kupinda kune zvose CosmoBody kushanda uye mabhonasi ekudya uye kunwa mapeji. Hapana zvachose kutora uye iwe unogona kubvisa nyore nyore chero nguva. Zvinyorwa zvekushanda nekunyanya kubatana pasi apa.
Short Workouts. Zvitsva Zvitsva. Edza CosmoBody FREE nekuda kwemazuva 10!
Ko CosmoBody chii?
CosmoBody ndiyo yakagadzirisa innovation muhutano iyo yakavimbiswa kuti iwe uwane zvakakwana. CosmoBody inosanganisira mazana emakambani e-cardio, yoga, uye masimba anoshanda. Kushanda kwavo kwakagadzirirwa uye kunotungamirirwa nevanokurumbira vadzidzisi vezvakanaka. Nekubatsira kwakakwana kwekushanda, nguva dzose kune nguva yekuita basa yekufananidza purogiramu yako. Hapana chikonzero chekupedza maawa akawanda achichikuridzira kunze kwekurovedza muviri apo iwe unogona kushandisa Workout CosmoBody.
Zvose zveCosmoBody's workouts zviri pakati pe5 maminitsi uye 30 maminitsi. Zvinowanika paIndaneti chero nguva pane chero chinhu chipi nechipi chakadai se iPhone, iPad, Roku, Android, etc. Kana ukasarudza kubatana neCosmoBody mushure mekuedzwa kwemazuva mashoma 10, CosmoBody inodhura zvishoma pane 33 masikati pazuva uye hutsva hwekushanda huwedzerwa zuva nezuva kuitira kuti iwe 'Haazombototsvaki kana kurohwa imwe hombe yemafuta.
2016 Update: CosmoBody's video membership membership program yakaguma pana December 21, 2015. CosmoBody mavhidhiyo achakurumidza kuwanika pachena paIndaneti mu2016. Kana uine mibvunzo pamusoro pezveramangwana reCosmobody, unogona kutumira email pairi service@cosmobody.com Kana kudana 1-212-649-2318.
Kana iwe uchida zvimwe zvekushanda kwefoni yako kana teretere, iva nechokwadi chekuona Beachbody On Demand. Kubatanidza pasi apa kuchaita kuti iwe usayine kweHARM 30-Day trial
51 pfungwa iri "CosmoBody FREE 10-Day Trial"
beatrice castillo anoti:
December 21, 2014 pana 5: 32 am
Ndingabvisa sei cosmobody trial
December 21, 2014 pana 2: 15 pm
Kuti uregese Cosmo yako account, pinda kuCosmoBody uye chengeta pane gear iri kumusoro kwekona yekona. Sarudza 'Zuva Rokubhadhara,' uye 'Cancel zvandinyoresa.
Katelyn T. anoti:
February 1, 2015 pana 12: 19 pm
Hakuchina "gear" icon, kana chero mimwe mifananidzo pane iri purogiramu. Chinhu chimwe chete chaunogona kuisa pane "Start Free Trial" "Logout" kana mavhidhiyo. Ndiri kuedza kubvisa kubhadhara kwangu. Ichi ndicho chinotyisa. Ndapota tibatsirei!
February 1, 2015 pana 3: 03 pm
Wakaedza here kubvisa kuCosmobody desktop desktop?
dombo shora anoti:
August 28, 2015 pana 2: 32 pm
Ndave ndichiedza asi hakuna munhu anodana zvakare uye haisi iyo yeruzivo rwekuita saizvozvo!
October 3, 2015 pana 6: 05 pm
Chinhu chimwe chete chiri kuitika kwandiri!
May 27, 2015 pana 6: 29 am
Cancel cosmobody subcription
May 27, 2015 pana 6: 35 am
Pls Bvisa my cosmobody, ini handidi kutongerwa
September 23, 2015 pana 3: 21 pm
Ndinoda kukonzera nhengo yangu. Ndaifunga kuti ndakaita asi ikozvino kuve kukanganisa i wpuld kuda kuvhara kambani yangu asi kurega kunyange kuwana log in
Virgil turley anoti:
October 10, 2015 pana 11: 56 am
Dana 1 800 267-8028 Ndiyo nzira yandakabvisa nayo yangu Hope tariro inobatsira
October 18, 2015 pana 1: 08 am
Izvi zvakashanda kwauri here? Vakanyora zvachose here?
October 20, 2015 pana 10: 03 am
Hapana nzira yandinoona nayo yekudzikisa chikafu ichi
November 18, 2015 pana 3: 19 pm
Hi im lisa, uye vakapa 7: 99 £ kubva mubhuku pasina mharidzo ye email, ndinoda kudzorerwa kwangu zvakare uye handidi iyo iyi mapenzi
Misty whitehead anoti:
December 5, 2015 pana 1: 55 am
Handikwanise kupinda mukati iri iri jekeseri chingawana izvi zvakadzingwa ikozvino ndakatumira tsamba dzekutumira mameseji nguva yakawandisa uye inoti kero iri yakakodzera kuti izvi zviitike ASAP kana ini ndichange ndichitaura nemumiriri wekutora mari kubva mubhuku rangu kana ini vakaedza nguva uye nguva zvakare kuti vabvise kubhadhara uku
January 22, 2015 pana 5: 09 am
Iwe unopinda sei kune cosmo manotsi wandinyoresa asi ini handioni login pane peji peji
April 14, 2015 pana 6: 23 pm
Ndinofanira kuziva kuti ndingaita sei kubhadhara zvandinoda
May 22, 2015 pana 12: 11 am
Iwe unofanirwa kutsvaga "cosmobody login" pane kombiyuta uye ipapo gear icharatidzwa mukona yepamusoro pakona iwe paunopinda mukati. Ipapo iwe uchakwanisa kuregera.
May 28, 2015 pana 11: 39 am
Shandisa iPhone yako, iPad, kana iPod touch kuti uchengetedze kubhadhara
Kubva Pamba pekona, tapota App Store.
Dhapa Tsvaga kubva pane menyu pasi.
Bhura kusvika pasi peji uye tapota Apple ID yako. Kana iwe usingaoni Apple ID yako, tapinda Ngena uye ugoisa mashoko ako. Zvadaro tapira yako Apple ID.
Tap Tap View Apple ID.
Kana uchitumirwa, pinda pasi yako password uye tapota OK.
Pamusoro peZvikomborero zveAccess screen, pona pasi uye tapota Pedza App Subscriptions.
Dhafazesa kubhadhara iwe waunoda kutarisira, uye sarudza sangano rekubhadhara.
Shandisa zvingasarudzwa kuti uchengetedze kubhadhara kwako. Iwe unogona kusarudza nguva yakasiyana yokubhadhara, kana kubvisa Auto-Renewal.
Zvinyorwa zvekuvandudza zvarudzo.
Shandisa kombiyuta yako kuti uchengetedze kubhadhara
Kana iwe usina kupinda mukati, enda kuChengetedza> Ngena muIndaneti uye ugoisa mashoko ako.
Endai Kuchengeta> Ona Account. Kana ukakumbirwa, nyora password yako uye ipapo chengeta View Account.
Pamusoro peAcount Information Information peji, pfuurira kune Chikamu cheZvirevo.
Dzvanya Dzairirira kurudyi rwezvinyorwa.
Sarudza kubhadhara iwe unoda kutarisira.
Sarudzo yekutarisira kushandiswa kwakasarudzwa.
August 21, 2015 pana 12: 26 pm
ivo vakangondibhadhara $ 9.95 Ndinoda kudzorerwa kwangu zvakare
Sherry Blackwell anoti:
June 25, 2015 pana 1: 06 pm
Ndakanga ndisingadi izvi ndakadana zuva rimwechete uye ndakadzingwa Ndinoda mari yangu zvakare mubhangi
August 7, 2015 pana 11: 45 am
Unsubcribe body cosmo
August 7, 2015 pana 11: 49 am
Iwe unofanirwa kubatana neCosmobody's customer support kuitira kuti ubvise hutungamiri hwako
August 19, 2015 pana 2: 47 pm
it's crazy !! ndinodzinga uhu hwangu pamberi pezuva re10 uye ini NDAKAI GOT CHARGED !!!
October 10, 2015 pana 11: 57 am
Dana 1 800 267 8028
January 22, 2015 pana 11: 06 am
Ndinopinda sei ku cosmobody
January 22, 2015 pana 11: 09 am
Ndinopinda sei kuChmomo muviri
March 30, 2015 pana 11: 23 am
Iniwo handigone kuregera izvi uye ndinoda ku ASAP ndisati ndatengesa. Ndapota tibatsirei. Pamusoro pemaitiro hapasina kukwanisa kubvisa kana nhamba yekudana. Isosi yepaiti yakasvibiswa uye ndinoedza kupinda mukati uye inonditora ini kune peji yepakutanga. Edza kutora imwe nyuchi yephasiwedi ... .same chinhu. SCAM !!!
March 31, 2015 pana 8: 32 pm
Heano mamwe mashoko ekudzivisa kubva kuCosmobody:
Kana iwe wakasayina kuCosmoBody kuburikidza newavo yepaIndaneti, unogona kuisa kuIndaneti yako yeCosmoBody uye chengeta gear icon. Mushure mekusarudza mashoko ekubhadhara uye enda kuregesa kubhadhara kwangu.
Kana iwe wakanyoresa CosmoBody kuburikidza neApp in-app purchase, unofanira kubvisa kubhadhara kwako kuburikidza neApple.
Kana iwe wakasayina kuCosmoBody kuburikidza neRoku in-app purchase, unofanira kubvisa Roku.
Kana iwe wakanyoresa CosmoBody kuburikidza neAmerica Fire TV in-app purchase, unofanira kubvisa Amazon.
Kana uine mamwe mimwe mibvunzo pamusoro pekuregesa kubhadhara kwako, tapota tumira email kutengesa vatengi pa service@cosmobody.com
April 20, 2015 pana 10: 16 am
Izvi hazvina maturo ... ndakabhadhara uye ndichiri kungotora mutoro wakabviswa mubhuku rangu..no nhamba kudana ?? funny
April 9, 2015 pana 10: 39 am
Ndingawana sei mari yangu kubva kune mari yakaipa pandakaedza kubvisa hurumende iyo ingandifambisa iko zvino ndine zvakawanda zvisingabhadhari mari inoda mari yangu zvakare NOW !!!
April 9, 2015 pana 10: 41 am
Iva nemari yakaipa yeaall yakaedza kuregera uhwu hauna kundirega ndichitsvaka mari yangu zvakare NOW !!
April 20, 2015 pana 10: 14 am
Ndakabvisa kubhadhara kwangu uye ini ndichiri kukwaniswa..never zvakare cosmo
April 28, 2015 pana 10: 38 am
Apo vakanditumira rusununguko rwemazuva 30 zuva rinopa ku email yangu, ivo vanosanganisira iyi kero pasi service@cosmobody.com. Uye ivo vakapindura kwandiri kubva pazviri. Icho chinhu chinonyanyisa kuita, kusanganisira kuwanika kweakaunti yako pane app kana chero iPad / iPhone safari. Ndakatumira email kuti, 'Kutenga kwangu hakuri kuitika uye ini ndinoda kubhadhara' sezvo makambani anogara achipindura maimeri ako paanenge achida chimwe chinhu kubva kwauri (kana iwe uchida kusvika kune imwe nzvimbo, iwe uri kufunga kubuda kana iwe vanoda kutanga chibvumirano etc).
April 29, 2015 pana 1: 01 pm
Kune nhamba yefoni yavaiva nayo asi hapana munhu anotora. Iko (212) 649-2318. Ndiri muchikepe chimwe chete. Ndakatumira mairi kakawanda kuti ndivabvise huri hwangu musati mazuva e10 uye havaiti. Neshoko raro, ndine chokwadi kuti ndichabhadharwa. Rombo rakanaka!
May 7, 2015 pana 8: 08 am
Sei pandinobvisa kadhi rangu ruzivo ruchiri pawebsite yako? Sei ini pandinozorodza peji iyo kubvisa bhodhi yokubhadhanifunga kuti handina kubvisa?
May 14, 2015 pana 11: 08 am
Wakawana email kubva kwavari here? Ndakabvisa kubhadhara kwangu musi iwoyo wandakatanga nayo uye ndakawana email inotsigira kuregeswa kwangu. Mariri, inoti iwe ucharamba uine ruzivo rweakaunti yako kusvikira pakuguma kwezuva rako rekuedza kwepachena kwe10 kana nguva yekubhadhara ikozvino. Izvozvo zvinogona kuva zviri kuitika, kunyange zvazvo 10 zuva rekuedzwa kusununguka risati rapfuura asi zvakadaro tarisiro haisi dambudziko!
May 19, 2015 pana 10: 28 pm
Same kwandiri. Ndakasainira uye ndakanyorera gear kumusoro kwepamusoro peji. Ndakaenda pasi pekubhadhara uye ndakatora kanzura. Ndangobva ndanyora nhasi uye zvinoratidza ini ndakadzingiswa asi ndichiri kuratidza CC yangu ruzivo! Ndinotarisira kuti yakashanda ndisati ndawana mhosva!
July 9, 2015 pana 12: 09 pm
Hi Brigitte, ndakaona kuti iwe wakatumira mashoko aya kanguva kadarika. Ndanga ndichitsvaga kana nguva yako yekuedzwa isina kupera wakabhadhara here? Ndine dambudziko rimwechete randakabvisa zuva randakasayina, iro raive zuro, asi ini ndichiri kukwanisa kupinda, ini CC yangu nhau iri pawebsite. Zvechokwadi handidi kupiwa mhosva, uye ini ndakanyorera maawa mashomanana akapfuura kutsanangura dambudziko rangu. Ndapota dzokai kwandiri kwandiri ASAP, uye fara zuva rako.
May 19, 2015 pana 11: 37 pm
Ini ndakanyadziswa, ini zvino ndoverenga uye ndinoona kuti zvakaoma sei kubvisa chirongwa ichi chepachena. Ndine mhuri uye handigoni kuwana mari isina basa inobva mubhuku rangu. SMH, ichawana nzira yekuisa kukwidza!
Yesenia Martinez anoti:
June 10, 2015 pana 1: 50 pm
Ndakakonzera kubhadhara kwangu uye imi varume muchiri kukanganisa 9.95 iyo cosmobody dose kunyange kunyange nhamba kuti inyore ini ndinotumira email uye havapinduri zvakare
Marissa W anoti:
June 14, 2015 pana 8: 47 am
Ndiri kubvumira cosmo uye saizvozvo iwe unofanira kunge uine mhosva huru / mhosva kune vanhu ava
June 26, 2015 pana 3: 27 pm
Ndiri kunzwa mhosva yeboka iri kuuya.
July 8, 2015 pana 12: 56 pm
Wow. Ndinoshuva dai ndaizoona zvese izvi ndisati ndasainira. Ndine nyaya dzakafanana!
July 8, 2015 pana 6: 05 pm
Iniwo ndine dambudziko rakafanana !!! Handigoni kuregera !!! Tinofanira kupomera !!! Izvi hazvitendi. Scam !!! Hazvizombotori kutenga Cosmo chero nguva kunyange Cosmo yedu tine !!!
August 5, 2015 pana 12: 28 pm
Ndiri kuva nechinetso chimwe chete. Ndaifunga kuwana 10 zuva rekuedza pasina uye mazuva gumi haasi kunyange zvakadaro uye vakatora 9.95 kubva mubhuku rangu kaviri. Uye hazvibviri kuwana mumwe munhu. Vachave vazonzwa kubva kumutemo wangu.
August 21, 2015 pana 1: 13 pm
pinda muakaunti yako uye tora paikoni iri kumusoro kwekona kona uye ichakutora iwe kumashoko ako ekubhadhara uye iwe unogona kubvisa kubva ipapo. Ndakabvisa hutano hwangu. ivo vakanditumira email kuti ndaregererwa
October 4, 2015 pana 4: 54 pm
Saka ndinofara ndakaona izvi ndisati ndasainira.
October 9, 2015 pana 5: 42 pm
Dana nhamba iyi kuti ibvise:
October 26, 2015 pana 6: 41 pm
Paunodana 800-267-8028, uchawana zvinyorwa zvinokukumbira kuti usiye mharidzo uye ivo vachakushevedza. Kana iwe ukagara pafoni, pakupedzisira chirongwa chekuchengetedza chikwereti chichapindura uye chibvisa kubhadhara kwako. Ndakamirira maminitsi e15, asi ini ndakawana "mvumo yangu yekusununguka" yakabviswa.
November 2, 2015 pana 2: 29 pm
Ndakadana (212) 649-2318 yakatsanangura kuti ndaida kubvisa kubhadhara kwangu ndakakanganwa password kuti ndipinde pakakumbirwa kuti ndigadzirise pasi password iyo hutumire yakatumirwa kungondidzosera kumusha wepamba, mutauriri wevatengi akati haugone kuregera pamutsara chero zvakadaro (kufara ndakadana) vakatora zvose zve 10 min uye kuedza kwangu kusununguka kwakabviswa.
November 2, 2015 pana 5: 11 pm
Ndangotora foni nemumiririri kuti ndibvise Call 1 800 267-8028. Yakangowana izvi kubva kune imwe yemhinduro dzaida kudzorera nyasha